Waxa la siinayo haweeney: talooyinka iyo fikradaha ugu fiican | Ragga Caqliga leh
Hadday tahay sannad -guurada, dhalashada ama dabbaaldeg kasta, rag badani ma oga waxa la siinayo qof dumar ah. Waana mararka qaar inay tahay wax dhib badan maadaama aan rabno inaan saamaynno kan koowaad oo aan ka dhigno hadiyad la xasuusan karo waqti ka dib. Waxaa jira waxyaabo badan oo la siin karo haweeneyda oo hanan karta hadafkeeda isla markaana abuuri karta xusuus qurux badan.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonnaa waxa la siinayo haweeneyda iyo maxay yihiin talooyinka ugu fiican ee loogu talagalay.
1 Hadiyadaha maadiga ah
2 Hadiyado la wada qaato
3 Waxa la siinayo haweeney si ay u yeelato xusuus wanaagsan
Hadiyadaha maadiga ah
Jawharku wuxuu noqon karaa hadiyad wanaagsan. Si kasta oo ay tahay jawharadu, waxa kaliya ee run ahaantii muhiim ah waa in uu ka yimid jaceyl, waa wax aad weligaa gashan karto waana hadiyad nololeed. Maxaa ka sii badan, Haddii aad ogtahay inay tahay naagta noloshaada, ha ka waaban inaad sharad ku samayso dahab aad u fiican: giraanta hawlgelinta, tusaale ahaan. Laakiin waxay kaloo noqon karaan hilqado, jijimooyin ama silsilado asal ah.
Ikhtiyaar kale ayaa ah in guriga lagu buuxiyo buufinno. Baashaal, qolkaaga ka buuxi buufinno oo la yaab markay albaabka furto. Waxaad ku soo laaban doontaa carruurnimadaada dhowr daqiiqo oo wada jir ah.
Mid ka mid ah hadiyadaha ugu fiican ayaa noqon kara buug ku saabsan taariikhdaada. Xusuusyo leh erayo iyo sawirro ayaa kuu sheegaya sidaad u kulanteen, sida jacaylku ku yimid, iyo sida xiriirkiinnu u kobcay. Tani waxay ugu mahadcelineysaa sheekadaada buugga shaqsiyeed kaas oo bixiya suurtagalnimada sheegidda sheekadaada si aad daqiiqadaha ugu fiican uga dhigto xusuus weligeed ah oo aan dhimanayn.
Udgoon aad u udgoon ayaa noqon kara hadiyad weyn. Markaad ogaato in dhalada cadarkiisa ay dhammaanayso, u iibso cadarkii uu jeclaa. Tani waa faahfaahin fudud, wuxuu ogaan doonaa inaad taqaan waxa uu jecel yahay, tani waxay noqon doontaa tilmaam la tixgeliyey. Ma aha oo kaliya hadiyadda la qaddarin doono, laakiin waa la heli doonaa waqtiga ku habboon mana jirto wax ka wanaagsan marka aad u baahan tahay.
Qaar ka mid ah dhar -xidhashada ayaa labadoodaba hadiyad u noqon kara. Haddii aad rabto inaad ka yaabiso hadiyad wanaagsan, dooro xirmo dhar -galmo oo jinsi ah isla markaana isla diyaarso habeen wanaagsan. Waxaad diyaarinaysaa ciyaaro xiiso leh si aad u soo noolayso xiisaha mararka qaarkood hurda nolol maalmeedka. Waqti wanaagsan wada qaad.
Hadiyado la wada qaato
Mid ka mid ah hadiyadaha ugu wanaagsan ee lagu garto waxa la siinayo haweeneyda waa cuntada ay ugu jeceshahay xilliga fiidkii. Noqo mid asal ah oo mala -awaal waxa ay jeceshahay oo ku raaxeysta bey'adda dabiiciga ah ee quruxda badan si aad ugu xusto jaceylkeeda. Diyaarso cuntada aad jeceshahay oo keydso kediska ilaa dhammaadka si aad u abuurto jawi gaar ah oo gaar ah. Weligaa waad xusuusan doontaa maalintaas.
Waraaqda jaceylku waxay u ekaan kartaa hal -ku -dheg, laakiin dhammaanteen waan kaaga mahadcelineynaa inaad wax noo qortay, haddii ay tahay lamaaneheenna. Aad bay u qiimo badan tahay in qof waqti u helo inuu ku muujiyo dareenkiisa ereyo, garaacis iyo qalbiga. Waxaad mar walba yeelan doontaa xusuustaas.
Toddobaadka jaceylka ayaa noqon kara midka ugu wanaagsan ee la wada qaato mana aha hadiyad kaliya iyada. Meel kasta ha ahaadee, waxa muhiimka ahi waa inaad wada socotaan. Sii usbuuc qiiro leh oo aadan waligaa joogin oo ku raaxayso jaceylkaaga. Waa mid ka mid ah hadiyadaha uu qof walba jecel yahay, booqo meel gaar ah, ku raaxeysto shirkadda oo ka takhalus caadooyinka.
Ikhtiyaar kale oo xiiso leh ayaa ah in la siiyo tigidh riwaayad. Haddii saaxiibkaa uu sannadka oo dhan sugayay riwaayadda kooxda ay ugu jeceshahay ama heesaha, ha ka waaban! Fursaddu waa halkaan sii laba tigidh oo yaab leh, si uu u raaco dadka uu doonayo inuu ku raaxaysto, hubaal wuu ku dooran doonaa!
Waxa la siinayo haweeney si ay u yeelato xusuus wanaagsan
Albamka xusuusta ka buuxa ayaa hadiyad weyn u ah kuwa jecel inay qiimeeyaan faahfaahinta oo mararka qaarkood lagu hayn karo qaab yar. Tusaale ahaan, ma aha oo kaliya inay noqoto album sawir, laakiin waxaad kaloo soo ururin kartaa walxaha qaarkood kugu dhiirigelinayaa inaad xasuusato sida tigidhada riwaayadda, tigidhada meelaha aad joogtay. Xaqiiqdii waxay noqon doontaa hadiyad qaas ah. Waxay kaloo la yaabi kartaa haddii aad xusuusta ku duubto qaab asal ah.
Hadiyad aan waxba ahayn waxay noqon kartaa maalin nasasho guud. Maalin aysan jirin waajibaadyo ama saacado. Ha ka labalabeyn inaad yeelato maalin nasasho leh oo aad ku booqan karto isboorti leh duugis ama nooc daaweyn ah oo kaa dhigaysa inaad nasato. Dhinaca kale, waxay sidoo kale u adeegi kartaa maalin u heellan fanka iyo dhaqanka. Waxaad noqon kartaa qorshe aad u xiiso badan haddii aad jeceshahay farshaxanka madxafyada. Waxaad arki kartaa bandhigyo ku meel gaar ah oo aad u xiiso badan oo ah rinjiyeynta, sawir qaadista ama farshaxanka. Waa hadiyad aad jeclaan doonto haddii aad ka hesho dunida fanka.
Hal habeen oo hudheel ah ayaa ku filan oo uma baahnid inaad meel fog aad u safarto. Waad la yaabi kartaa adiga oo ku siinaya habeen ka duwan mid ka mid ah adigoon magaalada beddelin. Waa hadiyad ku filan si aad u ilowdo cidhiidhiga maalinba maalinta ka dambaysa.
Booqashada caasimadaha Yurub waxay noqon kartaa mid aad u xiiso badan. Paris waxaa la sheegaa inay tahay magaaladii jaceylka runtiina waa qurux iyo jaceyl. Waxaa la mid ah nooc kasta oo raasamaal ah oo Yurub ah. Caasimadaha sida Rome, Prague, Vienna, Budapest, Lisbon, iwm. Waa wax la yaab leh in la soo booqdo sida lammaane.
Haddii aad jeceshahay wax ka khatar badan oo khadka ku jira waxaad ka iibsan kartaa safarka buufinta. Baaskiilka raaciddu wuxuu noqon karaa hadiyad cajiib ah iyo tacabur. Si kastaba ha ahaatee, ma ahaan doontid halis aad u badan sida noocyada kale ee isboortiga. Taa bedelkeeda, haddii saaxiibkaa uu yahay dal -xiise, waxaad siin kartaa xoogaa isboorti oo xad -dhaaf ah. Duulimaad dhaldhalaalaan, daldalaad lulid, quusid, canyoning ama baarashuud. Xadka waxaa dejiya geesinimada iyo geesinnimada mid walba.
Sida aad arki karto, waxaa jira hadiyado badan oo loo adeegsan karo haweeneyda mana aha wax adag in la arko iyada oo faraxsan. Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto waxa la siinayo haweeney.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Waxa la siinayo haweeney
Cunnooyinka hodan ku ah fitamiin D